Nigeria oo xaqiijisay sii deynta 100-ruux oo la heystay 42 cisho | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Nigeria oo xaqiijisay sii deynta 100-ruux oo la heystay 42 cisho
Cidamada Boliiska ee fadhigoodu yahay gobolka Samfara ee waqooyi-galbeed dalka Nigeria ayaa sheegay in wadahadallo waanwaan ah lagu sii daayey 100 –ruux oo 8-deedii bishii Juun ee la soo dhaafay ay kooxo burcad ah ka afduubteen gobolkaasi.
Mohammed Shehu, afhayeen u hadlay Boliiska Zamfara ayaa hadal uu baahiyay ku sheegay in aysan jirin wax madaxfurasho lacageed ah oo lagu bixiyay dadkaasi oo u badnaa haween iyo caruur.
Dadka la sii daayey oo u badnaa haween iyo caruur,ayaa laga afduubtay tuulada Manawa 8-dii Juun ee bishii la soo dhaafay .
Ilo xog ogaal ah ayaa wakaalada wararka ee AFP u sheegay in burcadu ogolaatay in la siidaayo dadka tuulada la afduubtay ka dib markii booliska iyo maamulka gobolka “ay u xaqiijiyeen in aan wax talaabo ah laga qaadi doonin kooxdaasi burcadka ah.”
Tan iyo bishii Diseembar sanadkii 2020-kii in ka badan 1,000 qof ayaa la afduubtay,Intooda badanna markii dambe waa lasii daayay sida la sheegay,kadib markii madax furasho la bixiyay, halka qaar qaar ladilay.
Previous articleMadaxweynaha JFS iyo Amiirka Qatar oo isweydaarsaday hambalyada Ciidul Adxaha
Next articleShil diyaaradeed oo ka dhacay Ceel-waaq
Mareykanka oo 100-milyan u qorsheeyay dib u dejinta qaxootiga Afghanistan
kullane - July 24, 2021 0
Madaxweynaha Mareykanka J...
kullane - July 23, 2021 0
Kooxo hubeysan oo ku suga...
Jacob Zuma oo hada ah maxbuus ayaa loo ogolaaday inuu ka qeyb galo aaska wa...
Abdirahman Ahmed Hussein - July 22, 2021 0